Zibaliwe izinsuku zesitobha sePirates - Ilanga News
Home Ezemidlalo Zibaliwe izinsuku zesitobha sePirates
Izikhulu zePirates kazeneme ngoThulani Hlatshwayo
ISITOBHA se-Orlando Pirates, uThulani Hlatshwayo, okuvela ukuthi useqhulwini kubadlali abazofakwa amasondo uma kuphela isizini njengoba engakaze ayenzele lutho le kilabhu selokhu efikile.
ZIBALIWE izinsuku zesitobha se-Orlando Pirates esilandwe ngenhloso yokuxazulula izinkinga kule kilabhu kodwa safike sazandisa kakhulu kunakuqala. IBucs imemezele ukuthi ibambe ufishi omkhulu isayinisa uThulani “Tyson” Hlatshwayo odlala emuva, obengukaputeni weBidvest Wits engasekho neqembu lesizwe lakuleli iBafana Bafana. Imlande ngenhloso yokuzoxazulula izinkinga emuva njengoba abalandeli bale kilabhu bebekhala ngokuthi yilapho okunenkinga khona.
Nokho kuvele kwabheda kakhulu kunakuqala njengoba efike wenza amaphutha awubungane abegcina eholele ekutheni leli qembu lilahle amaphuzu. Kuphoqelekile ukuthi iBucs ifune esinye isitobha njengoba isayinise u-Olisah Ndah waseNigeria ofike wenza omukhulu umehluko. Selokhu kufike uNdah, usizwa ngendaba isikimu uHlatshwayo. Leli phephandaba lihoshe ngemithombo yalo ukuthi uHlatshwayo useqhulwini ohlwini lwabadlali abangase bafakwe amasondo yi Bucs uma kuphela isizini.
Umthombo waleli phephandaba uthe: “Usihlalo wePirates u-Irvin Khoza akeneme neze ngendlela iPirates edlala ngayo nangendlela nje izinto ezenzeka ngayo ensimini. “Into emkhalisa kakhulu wukuthi wenza ngakho konke okusemandleni ukutholela le kilabhu abadlali abaseqophelweni eliphezulu kodwa kuvele kuzifanele. “Kodwa-ke lizokhala izembe uma kuphela isizini, kunabadlali abonayo ukuthi abafithi esitayeleni sePirates.
“UHlatshwayo nje uhamba phambili, angase ahambe. Kukhalwa ngokuthi ulinikiwe ithuba kodwa akawalungisanga amaphutha kunalokho wenza amaningi. “Into (uKhoza) emkhalisa kakhulu wukuthi lo mdlali uhola itshe le mali kodwa iPirates ayizuzi lutho ngalokho. “Uthungatha nonozinti njengoba kuhamba uWayne Sandilands. Akuyena uKhoza kuphela ongeneme ngoHlatshwayo, namadodana akhe uNkosana noMpumi, okuyiwona okuthiwa abheke iBucs njengoba uKhoza ehlale ematasa nawo kuthiwa aweneme neze ngaye,” kusho lo mthombo. Imizamo yokuthola uKhoza iphunzile njengoba ucingo lwakhe belukhala kodwa lungabanjwa.
Previous articleUbhokodwe wumyeni eficwa neshende alithole kwezokuxhumana
Next articleUMalema ukhuluma iqiniso okumele laziwe ngabantu